'काेभिड अस्पताल भरिए, सतर्क नभए जटिल अवस्था आउँदैछ’
‘काेभिड अस्पताल भरिए, सतर्क नभए जटिल अवस्था आउँदैछ’
विराटनगर, २८ असोज । विराटनगरमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि बनाइएका अस्पताल भरिएका छन् । होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई समस्या भए अस्पतालमा बेड पाउनै मुस्किल पर्छ ।
लक्षणसहितका संक्रमितको चाप बढेकाले अस्पतालले धान्न नसक्ने अवस्था आएको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
विराटनगरमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि कोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्र, विराट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, न्युरो कोभिड अस्पताल र नोबेल शिक्षण अस्पतालले छुट्टै अस्पताल सञ्चालन गरेका छन् ।
अस्पतालका बेड भरिएपछि कोरोना पोजिटिभ देखिएका बिरामीलाई कोभिड वार्डबाहेक जेनेरल वार्डमा राख्न थालिएको छ ।
विराटनगरको कोशी अस्पतालले सञ्चालनमा ल्याएको फिभर क्लिनिकमा शंका लगेर आएका बिरामीमध्ये २० देखि २५ प्रतिशतमा संक्रमण देखिन थालेको अस्पतालका सिनियर फिजिसियन डाक्टर दीपक सिग्देल बताउँछन् ।
कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्र विराटनगरमा ६३ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । अस्पतालमा उपचारत ८ जनालाई आईसीयूमा भर्ना गरिएको छ । १६ जनालाई एचडीओमा राखिएको छ ।
संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढेसँगै कोरोना संक्रमितको उपचारका बेड खाली नभएपनि म्यानेज गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्था धेरै जोखिमयुक्त भएको छ ।’ उनले भने, ‘धान्न नसक्ने भए पनि म्यानेज गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।’
बेड अभावमा अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् । ‘हामी आफैंले संक्रमितलाई गाह्रो नपरे अस्पताल नआउन सल्लाह दिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सास फेर्न गाह्रो भए घरमा अक्सिजन राख्न पनि सल्लाह दिन थालेका छौं । तर, अवस्था गम्भीर भएको खण्डमा भने अस्पताल नै आउनु पर्ने हुन्छ ।’
संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र बेड अभाव हुन सक्ने कारण ५० बेडको आइसोलेसन सेन्टर थप गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । ‘बेड थप्ने भनिए पनि धेरै कुराहरू म्यानेज गर्नु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘आइसोलेसन सेन्टर थप्न केही समय भने लाग्न सक्छ ।’
संक्रमित बिरामीको उपचार गरिरहेको बिराट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका प्लमोनोलोजिस्ट तथा क्रिटिकल केयर फिजिसियन डा. पुरु कोइराला समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएका कारण स्थिति भयावह भएको बताउँछन् । उनले ८० देखि ८५ प्रतिशत समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिसकेको कारणले अवस्था गम्भीर भएको बताए ।
संक्रमितको संख्या बढ्दै जाने हुँदा बेड नै नपाउने स्तिथि आउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘अस्पतालको सय बेडको कोभिड वार्ड र आईसीयू भरिएको छ,’ उनले भने, ‘संक्रमित भएर अस्पताल आएकालाई जेनरल वार्डमा राखेर उपचार गरिरहेका छौं र बेड खाली भएसँगै सिफ्ट गर्छौ ।’
आईसीयू बेड खाली नभएका कारण अस्पतालमा गम्भीर भएका संक्रमितले पनि ३ देखि ४ दिनमा नर्मल आइसोलेसनमा बसेपछि मात्र आईसीयूमा बेड पाउँछन् ।
उनका अनुसार अस्पताल भर्ना भएका ९० प्रतिशत बिरामीमा निमोनिया, सास फेर्न गाह्रो भएका र भेन्टिलेटर नै चाहिने गम्भीर अवस्थाका मात्र छन् ।
आवश्यक नपरेकालाई टेस्ट नगर्न तथा सामान्य अवस्था, लक्षण नदेखिएका तथा घरमै बस्न मिल्ने संक्रमितलाई सकेसम्म सावधानी अपनाएर घरै बस्न सल्लाह दिने गरेको उनले बताए ।
‘घर बसेकाहरूलाई अक्सिजनको गति नाप्न अक्सिमिटर किन्न सल्लाह दिएका छौँ । र, गम्भीर भएका बिरामीहरूलाई बेड खाली नभए पनि इमर्जेन्सीमा आउन परामर्श दिइरहेका र्छौँ,’ उनले भने, ‘लक्षण नदेखिएका तर, अस्पतालमा अन्य उपचार वा शल्यक्रियाका लागि आएकाहरूमा बढी संक्रमण देखिन थालेको छ ।’ लक्षण नदेखिएकाबाट संक्रमण सारिरहेको उनले बताए ।
चाडपर्व तथा जाडो मौसम पनि नजिकिएका संक्रमण अझ बढ्ने उनको विश्लेषण छ । भाइरसको संक्रमण आउने गर्मीसम्म उच्च बिन्दुमा जानसक्ने उनले बताए ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. नवराज सुब्बा संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको बताउँछन् । संक्रमण व्यापक हुँदा बजारमा चहलपहल बढेकाले अवस्था झन् बढ्ने उनले बताए ।
चाडपर्वसँगै चिसो मौसम नजिकिएका कारण संक्रमण झन् फैलने उनले बताए । नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर भएको बताउँदै उनले जनता आफैं सचेत नभए अवस्था जटिल बन्ने बताए ।
‘चाडपर्वमा हुने चहलपहलले संक्रमण झन् बढ्छ,’ उनले भने, ‘संक्रमण फैलँदा लक्षणसहितका बिरामी पनि बढ्छन् । हाम्रो स्वास्थ्य संरचना कमजोर भएकाले अवस्था जटिल बन्न सक्छ ।’
संक्रमण व्यापक हुँदा स्वास्थ्य संस्थाले धान्न नसक्ने बताउँदै उनले सर्वसाधारण आफैं सचेत हुनुपर्ने बताए ।